महिलाको आँखाबाट यसपालीको बजेट |
महिलाको आँखाबाट यसपालीको बजेट
प्रकाशित मिति :2015-07-15 14:37:51
हाम्रो परिवेशमा महिला विकासकाे प्रयास हुँदाहुँदै पनि आशातित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको एउटा कारण मध्ये महिलाहरूका विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमा श्रोत विनियोजनको कमी हो भन्ने विषय अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ ।
विनाशकारी भूकम्प पश्चात भएको मानवीय, आर्थिक सामाजिक र भौतिक विनासका अवस्थामा आएको आर्थिक वर्ष २०७२। ७३ को राष्ट्रिय बजेटले नवनेपाल पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नवनिर्माणकै कामका प्रकियावाट लगानी वृद्धि , रोजगारी सिर्जना , उद्यमशीलता विकास गरी आयआर्जन बढाएर आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य बजेटमा छ । पुनः निर्माणको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण कोषबाट व्यवस्थापन गरी ६ अर्ब ६४ करोड लागत लाग्ने गरी रकम विनियोजित छ । चलिआएका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका साथै पुर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र कृषि विकासका लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषय उल्लेखित छन् ।
सरकारले पाचँ वर्षभित्र पुर्ननिर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । काठमाडौं र वरिपरि पहाडी जिल्लालाई भूकम्पले धेरै प्रभावित पारेको हो । यी जिल्लाहरूमा पुननिर्माण र पुनःस्थापना गरिने हुनाले तराई मधेस विकासका कुरामा जोड दिएको छ । यसपछि पूर्वाधार विकास विकास, सामाजिक सुरक्षा र तराई मधेस क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । वैशाख महिनामा आएको भूकम्पले ल्याएको विनाशका कारण पुननिर्माणका कार्यक्रमहरू वाहेक पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।
यस अवस्थामा पुर्ननिर्माण प्राथमिकतामा हुँदा स्थानीय निकायको उपस्थितिको आवश्यकता सवैलाई यो कठिन परिस्थितिमा भएको हो र राहतका काममा समेतशुरुमा अन्योलको स्थिति रहनुका कारण नै स्थानीय निकायमा जनता प्रति उत्तरदायित्व हुने निकायको अभाव प्रमुख कारण भयो ।
गाविस र नगरपालिकामा सरकारले दिने अनुदान रकममा वृद्धि गरिएतापनि स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई महत्व र रकम वाँडफाड गरेको छैन । पुननिर्माणका काममा महिला सहभागिताका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । जहाँ करीब १५ वर्षयता निर्वाचन भएको छैन । यो निर्वाचन भएमात्र विकासमा महिला सहभागिता हुनेछ ।
बजेट भाषणमा भनिएको पुननिर्माणका सम्वन्धमा सरकारमात्र नभई र निजी क्षेत्र सहकारी संस्था र गैरसरकारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आम नागरिक, समुदायलाई यस अभियानामा संलग्न हुन अाव्हान गरिएको छ । भूकम्प पश्चात राहत र सहयोगका लागि स्थानीय राष्ट्रिय तहमा तदारुकताका साथ स्वस्फूर्त रुपमा मानिसहरू विभिन्न क्षेत्रवाट सहयोगका लागि तत्पर भए र गरे । विदेशी सहयोगको बाचा आउँदै गर्नुअघि नेपाली सहयोगी हातहरू अगाडि सरेका हुन ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणको कामका लागि ५० हजार युवालाई आवश्यक सीप विकास तालीम केन्द्रवाट डकर्मी सिकर्मीलगायत धारा विजुली मर्मत तालीम दिने योजना सरकारले बनाएको छ । यी युवाहरू मध्येमा महिलाका लागि पनि निश्चित कोटा उपलब्ध गराएमा मात्र महिलाहरू पनि डकर्मी सीकर्मी र धारा पानी मर्मतलगायत अन्य कामहरू सिक्न उत्साहित हुने थिए । उदाहरणका लागि गहना पसलमा गहना बनाउने कालिगढ सवै वैदेशिक रोजगारमा आएका छिमेकी मुलुकका पुरुष बढी छन । नेपाली युवा र महिलाले पनि यी कामहरू सिक्न सक्छन् । भूकम्पपछि काठमाडाैंमा कपाल काटने हजामहरूको समेत अभाव थियो । किन नेपाली केटाकेटीहरूलाई यो कामगर्न प्रोत्साहित नगर्ने ? रोजगारीका लागि भारतलगायत अन्य खाडी मुलुकमा जाने युवायुवतीहरूलाई अहिलेको नेपाल पुननिर्माणमा अवशर दिने विशेष योजना आएको भए हुने थियो ।
यसपाला बजेटमा शिक्षा स्वास्थ महिला सशक्तिकरणका विषय गाभिएर आएको छ जुन सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि महिला सशक्तिकरणका विषय विगतका बजेटमा जस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । योगमाया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूमा हुने हिंसा निवारणका कार्यक्रममात्र तोकिएको छ । महिलाउपर हिंसा नहुनपनि एकाङ्गी रुपमा कार्यक्रम भएर मात्र हुँदैन शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण सामजिक सुधारका विषय एकसाथ हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सुविधा वृद्धि गरी जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपाङ्ग , मातृस्वास्थ र बाल स्वास्थ कार्यकर्ताहरूका लािग कार्यरत महिला स्वयंसेवीका सुविधामा केही थप गरिएको छ । यसरी लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रममा थप रकम र विपन्नहरूका लागि औषधी सुविधा र सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गराउदा निशुल्क हुने व्यवस्थाहरू प्रशंसनीय छन् ।
अर्को कुरा महिलाका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था क्रमश वृद्धि गर्दै लगेर कूल बजेटको २० प्रतिशत महिलाहरूको दक्षता क्षमता र आयआर्जनका लागि विनियोति हुने परम्परा थियो । स्थानीय निकायमा जाने बजेट वृद्धि गरिएपनि महिलाका लागि भनिएका बजेट यसपाला कार्यक्रममा मौन देखियो । गाविसहरूलाई दिने अनुदानमा पाचँ लाखले वृद्धि भएको छ जुन जायज हो । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय सदस्यहरू सम्मिलित संयन्त्रले छनोट गरी जिल्ल्ला परिषदवाट पारित हुने पूवाधार विकास कार्यक्रममा पनि १ करोडमा ५० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । माननीय सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको १५ लाख रुपैयाँमा ५ लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ ।
तर महिलाका लागि भनि रकम विनियोजित शीर्षक भने कटौती भएको देखिन्छ । अझ यही वेला छापामा महिलाका लागि विनियोत रकम गोष्ठी र तालिममा खर्च भएका समाचार आए किन त्यसरी खर्च भए त ? यो महिला सशक्तिकरणका लागि आएको रकम गोष्ठीका लागि मात्र त होईन ? आय आर्जनलगायत आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हुन् । व्यवहारमा महिलाहरूले साना रकमवाट पनि आर्थिक उन्नती गर्दै आएका उदाहरणहरू छन । रोजगारीको स्थिति हेर्दा ८३ प्रतिशत जनसंख्याको प्राथमिक पेसा कृषि हो र बाँकी १७ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । महिलाहरूको संलग्नता कृषि क्षेत्रमा छ । कृषि व्यवसायसँग सम्वन्धित तालिमहरू किन आयोजना हुन सकेनन् । बजेट विनियोजन हुने वेलामा यी विषय चर्चामा आउनु र महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिने बजेटमा वृद्धि नहुनु अचम्म लाग्ने विषय भयो । सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको पनि उल्लेख्य संलग्नता छ तापनि उनीहरूले कृषिसँग सम्वन्धित उद्योग संचालन गर्ने र गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिने थियो तर, छैन । हाम्रो परिवेशमा महिला विकास प्रयास हुँदाहुँदै पनि आशातित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको एउटा कारण मध्ये महिलाहरूका विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमा श्रोत विनियोजनको कमी हो भन्ने विषय अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले अर्थिक वर्ष २०६४ -२०६५ देखि महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने शिर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो । यसको अर्थ यो होइन कि महिलाहरूलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा पहिला बजेट विनियोजन हुँदैन थियो । विशेष गरेर विपन्न महिलाहरूलाई अवशर दिन राष्ट्रिय बजेटले लेखाजोखा गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अवधारणा आएको हो । गत सालको आव २०७१ र ७२ सम्मपनि कूल बजेटको २० प्रतिशत महिलाहरूका लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने शिर्षकमा परेका थिए ।
विभिन्न सहकारी महिला सहकारीलगायतले कृषि सम्बन्धि सेवा दिएका छन् । यी समस्या समाधानमा महिला कृषकको सीप विकास र संलग्नता भएको कार्यक्रम आउन जरुरी छ । समग्रमा पुर्ननिमाण पुर्नस्थापन प्राथमिकतामा भएपनि महिलाका आँखावाट हेर्दा यसवर्षको बजेटले पुननिर्माण र पुर्नस्थापन कार्यमा आम महिलाको संलग्नता हुने विषय र कार्यक्रम पनि समावेश गर्न सकिने थियो । पुर्ननिर्माणमा सरिक हुन सवैलाई आव्हान गरिएपनि महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरि आयआर्जन बढाउन कृषक महिलाको प्रविधिमा पहुँच जस्ता विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।